Taratasin’i Jean Aza tia kely !
Izay ihany ilay mahavoa anareo ry Jean a ! Efa hita izao fa ny fanampian-dry Jean Malalatanana an’ilay kilonganareo no nampivoatra azy hiala amin’io mikandra sahady io dia lazainareo fa ataony fitaovana indray ny zanakareo.
Mba tsinjovy ihany, hoy aho ny ho avy fa aza dia tia kely ohatran’io foana. Ireny bob sy fitaovana nomena an-dry zareo ireny anie natao hampitomboiny sy hamitany ny bosiny dia mba manana ho avy mamiratra sy afaka mamaly babena anareo amin’izay izy any aoriana e ! Aza atao an’izany hoe ento aty zaraina ze azo izany foana rangahy ireo boaikely ireo fa tianareo foana ve ny hilona ao anaty fahantrana ao e ? Zay Jean a ! Mbo vakio ity taratasiko ity !